တာရန်တူလာကောင်ကဘာလဲစားသူတို့ကအသားစား Are သလား?
by ဒက်ဘီ Hadley
တာရန်တူလာကောင် များမှာ အသားစား ။ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. တာရန်တူလာကောင်ထိုကဲ့သို့သောဘား, ကြွက်နှင့်ငှက်ကဲ့သို့အင်းဆက်ပိုးမွှားသို့မဟုတ်ပင်ပိုကြီးတဲ့စားစရာအကောင်ကိုစားကြလော့။ သူတို့ဟာအင်းဆက်ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးတို့ကို, ပုရစ်နှင့်ကျိုင်းကောင်, ဇွန်လကောင်လေးတွေ, cicadas, millipedes, ကျိုင်းကောင်များနှင့်အခြားပင့်ကူများကဲ့သို့အထူးသဖြင့်ပိုကြီးတဲ့သူတွေကိုစားကြလော့။ ပိုကြီးတဲ့တာရန်တူလာကောင်လည်းဘား, ဘားပြုပ်, အသေးစားကြွက်, အိမျမွှော, လင်းနို့များနှင့်အသေးစားမြွေကိုစားလိမ့်မည်။ ဒီဟာသူတို့ရဲ့အစားအသောက်ကိုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုတက်စေသည်ပေမယ့်တစ်ဦးကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းမျိုးစိတ်သည်ဂေါလျတ် birdeater, အဖြစ်ကောင်းစွာသေးငယ်တဲ့ငှက်စားမှလူသိများသည်။
အခြားအပင့်ကူကဲ့သို့ပင် တာရန်တူလာကောင် အစိုင်အခဲ form မှာကသူတို့လုယူရာဥစ္စာကိုမစားနိုင်ပါ။ တစ်ဦးတာရန်တူလာကောင်တိုက်ရိုက်မုန့်ညက်ဖမ်းယူသောအခါ, ပထမဦးဆုံးလည်း chelicerae အဖြစ်လူသိများသည်၎င်း၏ချွန်ထက်အစွယ်နှင့်အတူလုယူရာဥစ္စာကိုက်, ပြီးတော့တစ်ဦးအကြောသေအဆိပ်နှင့်အတူကထိုး။ လုယူရာဥစ္စာကွပွီးတပြီးတာနဲ့, အတာရန်တူလာကောင်လုယူရာဥစ္စာ liquefy ကြောင့်အစာခြေအင်ဇိုင်းတွေထွက်လာတယ်။ အဆိုပါအစွယ်လည်းအစားအစာဖြတ်တောက်သို့မဟုတ်နှိမ်နင်းအတွက်ကူညီနိုငျသောအစွယ်အနီးတွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းချွန်ထက်, အနီရောင်ပန်းကန်အတူလုယူရာဥစ္စာကို item ဝါးသို့မဟုတ်ဖြိုဖျက်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဆိုပါပင့်ကူပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွယ်အောက်မှာကောက်ရိုးကဲ့သို့ mouthparts အသုံးပြု. ၎င်း၏မုန့်ညက်ကိုတက်ယူတာပဲ။
တစ်ဦးကတာရန်တူလာကောင်တစ်ဦး "နို့စို့အစာအိမ်။ " ရှိပါတယ် နို့စို့အစာအိမ်ရဲ့အစွမ်းထက်ကြွက်သားစာချုပ်, အစာအိမ်အရွယ်အစားတိုး, နှုတ်တော်ထွက်အမှတဆင့်နှင့်အူသို့တက်သည်၎င်း၏အရည်လုယူရာဥစ္စာကိုစို့ဖို့တာရန်တူလာကောင်ခွင့်ပြုထားကြောင်းခိုင်မာသောနို့စို့အရေးယူမှုဖန်တီးသောအခါ။
အဘယ်မှာရှိတာရန်တူလာကောင် Hunt က
အဓိကအားဖြင့်သစ်ပင်များအတွက်တာရန်တူလာကောင်အမဲလိုက်ခြင်းလုယူရာဥစ္စာ၏အချို့ Genera; အခြားသူများကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အနီးလိုက်ရှာ။ အားလုံးတာရန်တူလာကောင်ပိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်; သစ်ပင်-နေသောမျိုးစိတ်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး silken နေထိုင်စဉ် "ပြွန်တဲကို" ကုန်းမျိုးစိတ် Burrow မြို့ရိုးကိုတည်ငြိမ်နှင့်တက်ဆင်းတက်ပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပိုးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Burrow တန်းစီ။
တာရန်တူလာကောင်လွန်း, Prey Are
တာရန်တူလာကောင်ကြောက်စရာကိုကြည့်, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်း Predator ၏အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြသည်။ တာရန်တူလာကောင်ပေါ်စားသောက်ရန် likes ကြောင်းအရှိဆုံးအထူးပြုအသားစားအမှန်တကယ်တစ်ဦးအင်းဆက်ပိုးမွှားဖြစ်ပါသည်: "။ တာရန်တူလာကောင် Hawk" ဟုအဆိုပါနကျယ်ကောင်မိသားစု၏ကြီးမားသောအဖွဲ့ဝင် Hemipepsis ustulata လည်းတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများ အကြီးဆုံးတာရန်တူလာကောင်လမ်းကြောင်း, တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြီးမားတဲ့တာရန်တူလာကောင်သတ်ပစ် hawks ။
တာရန်တူလာကောင် Hawk တစ်ဦးတာရန်တူလာကောင်များ၏ lair ကိုရှာဖွေရနံ့ခြေရာခံခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ပင့်ကူကိုဖမ်းယူဖို့, နကျယ်ကောင်ခြေထောက် segments များအကြားပါးလွှာသောအမြှေးပါးအမြတ်ထုတ်ခြင်း, ပင့်ကူရဲ့နားလည်ရန်လက်နက်မကယ်မလွှတ်ရပေမည်။ အဆိုပါလက်နက်ပင့်ကူ paralyzes, အဲဒီနောက်နကျယ်ကောင်နောက်ကျောက၎င်း၏ Burrow နှင့်သိုက်ထဲသို့ပင့်ကူရဲ့ဝမ်းဗိုက်တခုတခုအပေါ်မှာကြက်ဥက drags ။ အဆိုပါနကျယ်ကောင်ထို့နောက်၎င်း၏ Burrow အတွက်ပင့်ကူတော်မူ၏နှင့်ပိုပြီးစားစရာဘို့ရှာဖွေချွတ်ပျံ။ အဆိုပါနကျယ်ကောင်ပိုးလောင်း Hatch က pupation ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့, ပင့်ကူရဲ့ nonessential အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် feeds နှင့်ကကျန်ရှိသောစားသုံး။
ဧရာ ပိုးနသန်းကောင် နှင့်လူသားကိုလည်းတာရန်တူလာကောင်သားကောင်မှလူသိများကြသည်။ တာရန်တူလာကောင်ဗင်နီဇွဲလားနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားအတွက်အချို့သောယဉ်ကျေးမှုကခဲဖွယ်စားဖွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ သူတို့ဟာမဟုတ်ရင်လူသားတစ်ဦးဗောက်သို့မဟုတ်အရေပြားယားယံစေနိုင်ပါတယ်သောဆံပင်, ဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်ပွင့်လင်းမီးကူးကင်နိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့သူတို့စားရနေကြသည်။
မည်သို့ Do ခုန်ပင့်ကူဤနေရာသို့သွားရန်?
အဘယ်ကြောင့်ပင့်ကူသူတို့ရဲ့ Webs ခုနှစ်တွင်သောင်တင် Get မဟုတ်လော
Black ကမုဆိုးမပင့်ကူအကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
Black နဲ့အဝါရောင်ဥယျာဉ်ပင့်ကူ, Aurantia argiope
တာရန်တူလာကောင်ရှားပါးသောကိုက် (ထိုအဆိုပါ Friendly Spider အကြောင်းအခြားအချက်အလက်နဲ့)
မုဆိုးမပင့်ကူ, Genus Latrodectus
Feature ကိုရုပ်ရှင်များတွင်ရော့ခ်စတားများကထိပ်တန်း 10 ဖျော်ဖြေ
အသက် 30 အခြေခံပညာငှက်အဖွဲ့များ
အဆိုပါ Croods တွေ့ဆုံရန်!
ကမျြးစာကိုကောင်းကင်တမန်: Dogs ကိုလျက်ကြတဲ့သူတောင်းစားရဲ့နာကျင်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တော်ကိုယူသွား
ဘယ်လိုအမြန် acrylic သုတ်ဆေးအခြောက်အပါသလား?
လူတို့၏အာတေမိသည် Hunt ကဂရိနတ်ဘုရားမ
အဆိုပါဘူမိဗေဒ, သမိုင်း, နှင့်ချန်တောင်တန်း Habitat ၏တောရိုင်း
ဂရိတ် Hammerhead ငါးမန်း
စုံလငျတဲ့လေထီးကမ်းတက်ကျဆုံးခြင်း ( "PLF") အလုပ်လုပ်စေအောင်ဘယ်လို
ဂျိန်း Seymour - အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီ၏တတိယဇနီး
ဂျော့ခ်ျဘုရ်ှရဲ့ 25 အများစုကအရှက်ခဏ
ဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်အတွက်ထပ်ခိုး (သို့မဟုတ်ထပ်ခိုး Angle) ဆိုတာဘာလဲ
ကမ္ဘာမြေ၏က Eleven စာတစည်းကမ်းများ
ဆရာရဲ့နေ့အဘို့ 12 Quotes
ကယ်လ်ဗင်ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
သီရိ Aurobindo: ထိပ်တန်း 10 ကိုးကားချက်များ
ပြောင်းပြန် Demand ကိုရာထူးအမည်၏အဓိပ္ပာယ်
ကို C # ထဲမှာ Functions များဖို့နိဒါန်း